Ciyaartoy caan ka ah Turkiga oo booliisku su'aalo waydiiyeen - BBC News Somali
Ciyaartoy caan ka ah Turkiga oo booliisku su'aalo waydiiyeen
Maraykanka oo xiraya Qunsuliyaddiisa magaalada Qudus
Posted at 13:27 12 Oct13:27 12 Oct
George Weah oo daawacay ciyaar ay Liberia guuldarro kala kulantay Congo
Madaxweynaga Liberia George Weah ayaa daawacay ciyaar uu xulka qarankiisu guul darro 3 iyo hal ah kala kulmay oo uu la yeeshay Congo, ciyaartaas ayaana ka tirsan isreebreebka Koobka Qaramada Afrika ee sannadka 2019.
Madaxweynaha oo horay u soo noqday ciyartoyga ugu fiican dunida ayaa ciyaar saaxiibnimo u dheelay Liberia bishii Sebtembar
Waa guushii koobaad ee Congo ay ka soo hoyiso kooxaha ku wada jira horinta G, 4 dhibcood ayayna sidaas ku yeelatay, halka Liberia-na ay meesha u hoosaysa ka gali doonto shaxda, hal dhibic ayayna leedahay ka dib saddex ciyaarood oo ay dheeshay.
Labadan dal ayaa mar kale ku ciyaari doona Monrovia Talaadada soo socota.
Haweenay 24 sano ONLF ahayd oo markii u horraysay qoyskeeda la midowday
"Ninkaygu habeenba nafis ma arkin, sidii loo rafaadinayay ee qawda loogu hayay ee loo xirayay ayuu markii dambe rafaadkii ku dhintay" ayay tiri Cambaro oo dib u milicsanaysa wixii soo maray qoyskeeda.
"Silic buu adduunka ku dhamaystay dalkana waa laga wada ogyahay" ayay intaas ku dartay.
Hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in ay laamaha ammaanka ee dalka Itoobiya gaysteen dhibaatooyin baaxad leh isla markaasna dad badan oo lagu dhibaateeyay xabsiga.
Warbixintan oo intan ka dheer lifaaqan kaga bogo
Ama hoos ka dhagayso waraysi aan la yeelanay.
Posted at 12:51 12 Oct12:51 12 Oct
Ramla Cali: Feedhyahan qarsoodi lib ku gaadhay
Warbixintan oo aad u dheer lifaaqan kaga bogo.
CHARLES HYAMSCopyright: CHARLES HYAMS
Posted at 12:43 12 Oct12:43 12 Oct
Dhagaxaan waawayn uu burburiyay guryo Uganda ku yaalla
Ugu yaraan 36 ruux ayaa la xaqiijiyay in ay dhineen, iyadoo hawlaha samato bixinta iyo baadigoobku ay wali sii socdaan.
Dadaalladaas ayaana daba socda mahiigaanno iyo dhul go’ay oo dhibaato baaxad leh ka gaystay bariga Uganda Khamiistii, sida ay sheegtay haweenay u hadashay Hay’adda Laanqayrta Cas ee Uganda.
Biyo awood badan oo dhagaxaan waawayn wata ayaa burburiyay guryo, sida ay wakaaladda wararka ee AFP ka soo xigatay Irene Nakasiita.
“Kooxahannaga baadigoobka iyo gurmadka ayaa deegaankaas ku sugan iyaga oo dadka samato bixinaya burburkana ka soo hoos saaraya.” Ayay intaas ku sii dartay.
Posted at 6:54 12 Oct6:54 12 Oct
Ciyaartoyga caanka ka ah dalka Turkiga Arda Turan ayay booliiska Turkigu su’aalo waydiiyeen, iyadoo la hadal hayo in uu sanka jabiyay heesaa caan ah.
Muranka la sheegay in uu dhex maray ciyaartoyga iyo fannaan Berkay Sahin ayaa horraantii toddobaadkan ka dhacay goob habeenkii lagu caweeyo oo Istanbul ku taalla, sida ay ku warrantay warbaahinta turkiga.
Turan oo 31 jir ah ayaa muddo saddex saac ah su’aalo lagu waydiiyay xarun booliis ka dibna waa la sii daayay, sida uu daabacay wargeyska Hurriyet ee maalin walba ka soo baxa dalka Turkiga.
Ciyaartoygan khadka dhexe ka dheela ayaa amaah ahaan ugu dheela kooxda Basaksehir isaga oo kaga yimid dhanka Barcelona.
Wuxuu sidoo kale u dheela xulka qaranka ee Turkiga.
Labadan nin ayaa la sheegay in ay isku maandhaafeen goob lagu caweeyo oo ku taalla deegaanka Emirgan ee magaalada Istanbul toddobaadkii hore.
Fannaanka oo loo yaqaanno Berkay waxaa goobta lagu caweeyo ku wehelisay xaaskiisa Ozlem Ada Sahin marka ay Turan isku dhacayeen.
Sahin ayaa wargeyska Haberturk u sheegtay in ciyaartoygu uu six un ula hadlay iyada ka dibna uu ninkeeda weeraray.
Berkay oo aad looga yaqaanno Turkiga ayaa loo sii qaaday isbitaal si qalliin loogaga sameeya sankiisa oo jabay.
Posted at 6:49 12 Oct6:49 12 Oct
Taxana Soobe oon Thabit ku waraysannay
Waxaannu weli ku guda jirnaa warbixinnadii aanu todobaadkan kaga hadlaynay qaraxii Soobe ee ay dadka badan ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Muqdisho14-kii bishii OKtoobar ee sanNadkii hore.
Maanta waxaanu dib u eegaynaa sida maamulkii magaalada Muqdisho ee xilligaasi jiray uu uga jawaabay masiibadaasi.
Thabit Cabdi Maxamed waa duqii hore ee magaalada Muqdisho, 10 daqiiqo ka hor inta uusan qaraxaasi dhicin ayuu maray isla goobta uu qaraxu ka dhacay.
Thabit ayaa arrintan uga warramay wariyaha BBC-da Faadumo Macallim Abuukar, oo marka hore waydiisay waxa uu ka xasuusto qaraxii Soobe?
Posted at 5:55 12 Oct5:55 12 Oct
Safiirka Sacuudiga u fadhiya UK oo ka walaacsan saxafiga la la’yahay
Safiirka dalka Sacuudi Carabiya u fadhiya UK ayaa BBC-da u sheegay in uu ka "walaacsan yahay" Jamal Khashoggi oo ah saxafi Sacuudiga u dhashay oo la la’yahay.
Balse Amiir Maxamed bin Nawaf al Saud ayaa intaas ku daray in ay "bisayl la’aan tahay" in hadda wax laga dhoho xaaladda.
Khashoggi oo ah nin aad u dhaliila dawladda Sacuudi Carabiya ayaan la arkin tan iyo markii uu booqday qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay Istanbul toddobaadkii hore.
Dhanka kalana Sir Richard Branson oo ah maalgashade Ingiriis ah ayaa sheegay in uu hakiyay maalgashigii uu ku samayn lahaa Sacuudi Carabiya, wuxuuna arrintaas ku sababeeyay saxafiga la waayay.
Gabadhii u doonanayd wariye Khashoggi ayaa ka baqaysa in la afduubtay ama la dilay, halka masuuliyiinta Turkiguna ay ka rumaysan yihiin in ay dileen dad Sacaduudiga u shaqaynayay.
Sacuudi Carabiya ayaa diiday in ay dishay Khashoggi waxayna ku adkaysanaysaa in uu qunsuliyadda ka baxay wax yar ka dib markii uu soo booqday.
Waa maalin Isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 12 bisha Oktoobar sannadka 2018.
Posted at 10:27 11 Oct10:27 11 Oct
Booliis Kenya oo baaritaan lagu samaynayo bas gudoomay awgii
Taliyaha booliiska Kenya Joseph Boinnet ayaa sheegay in qaar ka mid ah booliiska baaritaan lagu samayn doono iyaga oo loo hayso shilkii baska ee Arbacadii dhacay oo ay ku dhinteen 56 ruux, sida uu ku soo warramayo weriyaha BBC-da Ferdinand Omondi.
Mulkiilihii shirkadda baska leh ayaa la xiray ayuuna intaas ku daray.
Taliye Boinnet oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa sheegay in basku uu ruqsad u haystay in uu qaado 62 rakaab, balse uu qaaday 71 ruux. Sidoo kalana uusan haysanin ruqsad uu habeenkii ku safro.
Waxaa lasamayn doonaa baaritaan ku aadan in booliisku ay si ula kac ah isaga indho tireen shuruucda la baal maray.
Baska oo u kala safrayay Nairobi iyo Kisumu ayaa waddada ka baxay sida uu booliisku sheegay.
Dadka ayaa buux dhaafiyay, xawaare aad u sarreeyana waa lagu waday, sida uu warbaahinta gudaha u sheegay qof ka mid ah dadkii badbaaday.
Posted at 10:25 11 Oct10:25 11 Oct
Cirbixiyeeno kasoo booday dayax-gacmeed ciladoobay
Dayax-gacmeed ay saarnaayeen cirbixiyeeno Ruushka u dhashay ayay cillad ku qabsatay hawada sare sida ay tabinayso warbaahinta Ruushka, balse dadkii saarnaa ayaa ka badbaaday.
Waxaa la sheegay in shaqaalahan ay dayax-gacmeedka kaga soo baxsadeen qalab yar oo loogu talogalay, kaas oo si nabdoon dhulka ugu soo celiyay.
Labada cirbixiyeen oo kala ah Alexey Oychinin oo Ruushka u dhashay iyo Nick Hague oo Maraykanka u dhashay ayaa la sheegay in ay bad qabaan sida ay sheegtay wakaaladda cirbixiyeenada Maraykanka ee NASA.
Gantaalkii ay saarnaayeen oo lagu magacaabo Soyuz ayaa halaabay markii uu muddo 6 saacadood ah hawada kusii jiray.
Warbixintan oo intan ka faahfaahsan lifaaqan kaga bogo
Posted at 8:41 11 Oct8:41 11 Oct
Taajirka ugu da’yar Afrika oo la afduubtay
Ninka la sheegay in uu yahay maalqabeenka ugu da’yar Afrika ayay niman wajiga soo qarsaday ku afduubteen magalad Dar es Salaam ee dalka Tanzania, sida ay booliisku sheegeen.
Maxamed Dewji oo 43 jir ah ayaa laga afduubtay huteel uu ku jimicsanayay.
Saddex ruux oo arrintaas lala xiriiriyay ayaa la xiray, labada ruux ee afduubka sameeyayna waxaa la rumaysan yahay in ay ajaaniib yihiin, sida ay booliisku sheegeen.
Ma cadda ujeedada laga leeyahay afduubka Dewji.
Jariidadda dadka ladan ka faaloota ee Forbes ayaa ku warrantay in hantida Dewji ay gaarayso1.5 bilyan oo doolarka Maraykanka ah.
Dewji oo dadka deegaanku ay u yaqaannaan Mo ayaa lagu ammaanaa in ganacsiga heerkooda oo ahaa jumlo iyo tafariiq uu u badalay ganacsi Afrika ka shaqeeya, sida ay ku soo warramayo wariyaha BBC Athuman Mtulya oo ku sugan magaalada Dar es Salaam.
Posted at 6:58 11 Oct6:58 11 Oct
"Hala daad gureeyo dhammaan qaxootiga Nauru"
Hay’ddaa Dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa ku baaqday in degdeg ah loo daad gureero dhammaan dadka magangalyo doonka ah ee ku nool dalka Nauru, iyada oo bartanka lagaga jiro caafimaad darro dhanka maskaxda ah oo soo foodsaartay.
Hay’adda MSF ayaa muddo 11 bilood ah baxnaano ka wadday xaruntaas ay gacanta ku hayso dawladda Australia ee ku taalla jasiiradda yar, balse dawladda Nauru ayaa dhawaan dalbatay in ay halkaas isaga tagaan.
Masuuliyiinta Nauru iyo kuwo Australia kama aysan jawaabin baaqa hay’adda dhakhaatiirta aab xuduudda lahayn ee MSF.
Xarunta dadka lagu hayo ee Nauru waxaa samaysay Australia sannadkii 2013kii, heshiiskaas oo ahaa mid muran dhaliyay oo hoy loogu samaynayay dadka magangalyo doonka ah ee la qabto iyaga oo isku dayaya in ay Australia ka galaan dhanka badda iyaga oo doomo adeegsanaya.
Australia ayaa sheegta in siyasaddaas ay uga golleedahay in ay ka hortagto in dad ay ku le’daan badda iyo in ay ku niyad jabiso kuwa dadka tahriibiya, balse aad ayaa loo dhaliilay fikirkaas.
Madaxa hay’adda MSF ee dalka Australia Paul McPhun ayaa yiri: “Waa in sida ugu dhakhso badan loo joojiyaa siyaasaddan, isla markaasna dawladuhu aysan samaynin qorshe ay midkan uga tusaale qaadanayaan.”
Posted at 6:22 11 Oct6:22 11 Oct
Nin qarax culus la damacsanaa doorashada Mareykanka oo la qabtay
National Mall wuxuu ku yaallaa bartamaha Washington DCImage caption: National Mall wuxuu ku yaallaa bartamaha Washington DC
Dacwad oogeyaasha dalka Mareykanka ayaa sheegay in magaalada Washington DC lagu qabtay, oo la maxkamadeynayo nin qorsheynayay inuu qarax ismiidaamin ah la beegsado doorashada xilliga dhexe ee la filayo iney dhacdo bisha soo socota.
Waxay sheegeen in Paul Rosenfeld oo 56 jir ah uu diyaariyay shey qarxa oo uu culeyskiisu dhanyahay 91 kiilo, uuna damacsanaa inuu 6-da bisha Nofeembar qarax aad u weyn la beegsado dhismaha xarunta qaran ee National Mall oo ku taalla magaalada caasimadda ah.
Ninkan ayay sheegeen inuu doonayay sidii loogu baraarugu lahaa arrin uu aaminsanyahay oo ku saabsan in xilalka siyaasadeed ee dowladda loo soo xusho si caadi ah oo aan ku xirneyn doorasho.
Haddii lagu caddeeyo dambiga loo maxkamadeynayo, waxaa suurta gal ah inuu wajaho xukun xabsi oo gaaraya 20 sano.
Mr Rosenfeld – oo go’aan ku gaaray inuusan la hadlin laamaha ammaanka – ayaa Arbacadii lagu soo oogay labo dacwadood oo kala ah inuu farsameeyay walxo qarxa iyo inuu dalka si sharci darro ah ku soo galiyay walxo qarxa, sida ay dacwad oogeyaasha sheegeen.
"Haddii uu qorshaha lagu eedeeyay ku guuleysan lahaa, Rosenfeld wuxuu baabi’in lahaa nolosha dad fara badan oo aan waxba galabsanin, kuwaasoo munaasabaddaas goob joog ka ahaan lahaa, wuxuu sidoo kale sababi lahaa burbur aan qiyaastiisa la garaneynin”, waxaa sidaas yiri William Sweeney oo ah ku xigeenka agaasimaha xafiiska FBI-da ee magaalada New York.
"Nasiib wanaag, qorsheyaashiisii waa la fashiliyay waxaana si deg deg ah uga hor tagay qof muwaadin ah oo arrintaas ka walaacay oo macluumaad siiyay xubno ka tirsan laanta la dagaallanka argagixisada ee FBI-da”. Ayuu yiri.
Saraakiisha laamaha ammaanka ayaa sheegay in 9-kii bishan Oktoobar ay walxaha qarxa oo aad u culus ka heleen ninkan gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Tappan ee magaalada New York.
Qabashadiisa ayaa timid ka dib markii qof shacab ah uu ninkaas ka helay warqado iyo farriimo ku saabsan qorshaha uu maleegayay, ka dibna uu war galiyay masuuliyiinta laamaha ammaanka.
Dacwad oogeyaasha gacanta ku haya kiiskiisa ayaa intaas ku daray in Mr Rosenfeld uu markii dambe qirtay inuu internet-ka ku dalbaday qalab loo adeegsado sameynta waxyaabaha qarxa isla markaana uu sameeyay tijaabooyin qarxin ah.
Posted at 6:03 11 Oct6:03 11 Oct
Duufaantii ugu xumayd abid oo ku dhufatay Koonfurta-bari ee Florida
Magaalada Panama ee gobolka FloridaImage caption: Magaalada Panama ee gobolka Florida
Dabayshii ugu xoog badnayd ee abid ku dhufata Koonfurta-bari ee gobolka Florida ee dalka Maraykanka ayaa hadda ku sii wajahan gobolka Georgia ka dib markii ay burbur baaxad leh ka gaysatay Florida.
Duufaanta Michael oo joogeedu saddex mitir yahay ayaa ku dhufatay agagaarka Panhandle ee gobolka Florida, iyadoo goysay geedaha iyo saqafyada guryaha.
Hal qof oo geed ku soo dhacay ayaana la sheegay in uu dhintay.
Duufaantan Michael ayaa saacaddiiba jaraysa 200km.
Duufaanta ayaa koronto la’aan ka dhigtay ku dhawaad 500,000 oo ruux oo ku nool gobollada Florida, Alabama iyo Georgia, sida ay sheegeen shaqaalaha gurmadka degdegga ah.
Posted at 5:58 11 Oct5:58 11 Oct
Waa maalin Khamiis ah oo taariikhdu ku beegan tahay 11 bisha Oktoobar ee sannadka 2018.
Posted at 15:14 10 Oct15:14 10 Oct
Kheyre oo maalintii labaad booqanaya Sacuudiga
Xafiiska Ra'iisul wasaarahaCopyright: Xafiiska Ra'iisul wasaaraha
Kheyre iyo boqor SalmaanImage caption: Kheyre iyo boqor Salmaan
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo maalintii labaad booqanaya dalka Sacuudiga ayaa maanta qasriga boqortooyada ugu tegey boqorka waddankaas, Salmaan binu Cabdulcasiis.
Qoraal laga soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in "Ra’iisul wasaare Khayre iyo Boqor Salmaan ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee Soomaaliya iyo Sucuudiga, iskaashiga dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda".
Waxaa kale oo qoraalka lagu sheegay in Mr Khayre uu sidoo kale kulamo la qaadanayo madaxda Bangiga horumarinta Islaamka, oo ay ka wada hadlayaan horumarka dhaqaalaha Soomaaliya, iyo "maal-gelinta iyo dib-u-habaynta ballaaran ee lagu sameeyay hannaanka maamulka maaliyadda dalka".
Shalay ayuu ra'iisul wasaaraha Muqdisho kaga amba baxay dayaarad khaas ah oo uu Sacuudigu u soo diray.
Posted at 12:03 10 Oct12:03 10 Oct
Makhaayadda KFC ee dalka Zimbabwe oo wayday lacag ay digaag ku soo gadato
Makhaayaddaha caanka ku ah cuntooyinka fudfudud ee ku yaalla dalka Zimbabwe ayaa albaabada la isugu laabay ka dib markii ay ka sii dartay lacag la’aanta dalkaas, bil uun ka dib markii madaxweyne Emmerson Mnangagwa uu ku guulaystay doorashadii.
KFC ayaa ogaysiisyo ku soo dhajisay makhaayadaheeda ku yaalla caasimadda Harare iyo magaalada labaad ee ugu wayn dalkaas ee Bulawayo, iyada oo dadka ku wargalisay “in ay sii xirnaan doonaan inta lagu guda jiro wakhtigan adag” tan iyo inta ay wax iska badalayaan.
“Xaqiiqdii waxaan waynay lacag aan siino dadkii aan ka soo adeegan jirnay, maadaama oo ay lacag doolar ah naga rabaan,” ayaa lagu qoray ogaysiisaka.
Makahaayadda St Elmos pizza ayaa iyaduna sheegtay in ay xirtay xarumaheedii sabab midaas la mid ah awgeed, waxayna intaas ku dartay in inta wakhtigaas lagu jiro ay samayn doonto nadiifin heer sare ah iyo dayactir.
Posted at 11:52 10 Oct11:52 10 Oct
"Dad aan wali ka ladin saxariirtii ay ka soo mareen qaraxii Soobe"
Waxaa laga yaabaa in ay baaba'een inta badan raadadkii muuqday ee uu reebay qarixii soobbe, balse saamayntii uu ka tagay dagaalkii Soobe ayay wali dad badan la nool yihiin.
Inkastoo dhaawac yadii jireed ay intooda bogsadeen, dhismeyaal badanna dib la isaga dhistay haddana dhaawacyo badan oo quluubta soo gaaray ayaan wali dhaymin.
Dadkaasna waxaa ka mid ah Cabdullaahi Cali Maxamed oo ah 27 jir uu dhaawac culus ka soo gaaray weerarkii is qarxinta ahaa ee boqolaalka qof lagu dilay bishan oo kale sanadkii hore isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho.
"Ciyaalkaas intay ka barbaarayaan anigay ii baahan yihiin, hooyay u baahan yihiin, hooyadoodse way dhimatay, subixii iyaga oo hurda ayaan ka kalahaa, si aan bariis ugu soo raadiyo, mararka qaarna waxaan soo laabtaa iyaga oo seexday." Ayuu yiri Cabdullaahi oo qaraxaas ku waayay xaaskiisii uu jeclaaa iyo gabadh uu dhalay oo ay goobta qaraxa wada joogeen.
Inkasta oo uu qadarta ku qanacsanyahay haddana dhaawaca jireed iyo midka maskaxeed ee soo gaaray marka uu gocday indhihiisa illin ayaa soo dhaaftay.
Raadadka xannuunka xusuuseed ee xubnaha ku dhaawacmay qaraxii Soobe ama goobjooga u ahaa wixii maalintaas dhacay ma yara, qaarkood hurdada ayay habeenkii ka salalaan halka qaarkoodna ay hurdadu ku yartahay.
Warbixintan oo intan ka faahfaahsan kaga bogo lifaaqan
Posted at 11:46 10 Oct11:46 10 Oct
Macallimiin lagu laayay dalka Kenya
Labo macallin oon Muslimiin ahayn oo dhigayay dugsi sare ayaa habeennimadii Talaadada la dilay ka dib markii bam lagu tuuray gurigooda oo ku yaalla magaalada Lafey ee bariga gobolka Mandera, sida ay booliisku sheegeen.
Booliiska kaydka ah ayaa weerar ku qaaday rag loo malaynayo in ay ka tirsan yihiin kooxda Al Shabaab, kuwaas oo markii dambe baxsaday.
Booliiska ayaa hadda ugaarsanaya dadka weerarka soo qaaday.
Mandera oo xadka Soomaaliya ku taalla ayay si joogto ah uga dhacaan weerarro lagu bartilmaameedsado dadka aan Soomaalida ahayn ee kiristaanka ah ee deegaannadaas ka shaqeeya.
Horraantii sannadkan afar ruux oo dhagaxaanta ka jabin jiray gobolka Mandheera ayay dileen dad looga shakisan yahay malayshiyada Al-Shabaab.
Weerarkan ayaa yimid iyadoo ururka macallimiinta Kenya uu ka soo horjeedo in macallimiin aan deegaanka u dhalan lagu qoro gobolkaas.
Posted at 6:58 10 Oct6:58 10 Oct
Ugu yaraan 40 ruux ayaa ku dhimatay shil bas oo ka dhacay waddada isku xirta magaalada caasimadda ah ee Nairobi iyo magaalada Kisumu ee dhanka galbeed ku taalla, baska ayaana waddada ka baxay sida ay booliisku sheegeen.
“Qaybtii sare oo baska ayaa go’day” sida uu sheegay qof booliiska u hadlay.
Booliiska ayaa sheegay in darawalku uu xakamayn waayay gaariga.
Baska waxaa saarnaa 52 ruux marka uu shilku dhacayay saacadihii hore ee Arbacada, sida ay booliisku sheegeen.
Warbaahinta dalka Kenya qaarkeed ayaa sheegaysa in dadka geeridooda la xaqiijiyay ay 42 ruux yihiin.
Idaacadda Midnimo ee dalka Kenya laga leeyahay ayaa Twitterka soo dhigtay gaariga oo si xun u gadoomay burbur xunna uu ka muuqdo.